अपि पावर कम्पनीको हकप्रद शेयर बाँडफाँट तथा रकम फिर्ता
साउन १, काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले गत जेठ २० गतेदेखि असार १३ गतेसम्म सार्वजनिक निष्कासनमार्फत विक्री गरेको २९ दशमलव ३८ प्रतिशत हकप्रद शेयर बाँडफाँट गरेको छ ।
कम्पनीले रितपूर्वक आवेदन दिने ८८ हजार ९२२ जनालाई ५४ लाख ५४ हजार ४०१ कित्ता शेयर बाँडफाँट गरेको हो । अपि पावरले प्रतिकित्ता रू. १०० अंकित दरको ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद शेयर विक्री खुला गरेकोे हो । यस पटक कम्पनीको २ लाख १५ हजार ५९९ कित्ता शेयर वितरण हुन सकेन ।
यस पटक वितरण हुन नसकेको उक्त शेयर कम्पनीले लिलामी प्रकृयाबाट विक्री गर्नेछ । कम्पनीले यो हकप्रद शेयर प्रयोजनका लागि वैशाख २९ गते (एक दिन) बुक क्लोज गरेकाले वैशाख २८ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र यो हकप्रद शेयर खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।
हकप्रद शेयर बाँडफाँटमा नपरेको रकम कम्पनीले साउन ३ गतेदेखि फिर्ता भुक्तानी गरिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड तथा मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयहरु मार्फत दरखास्त बुझाउनेहरुको हकमा सोही स्थानबाट र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय तथा अपि पावर कम्पनी लिमिटेडमार्फत दरखास्त बुझाउनेको हकमा सम्बन्धीत कम्पनीमार्फत रकम फिर्ता भुक्तानी गरिने कम्पनीको भनाइ छ । यो शेयर विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
अपिले यसअघि पनि गत कात्तिक १४ देखि मंसिर ४ गतेसम्म १ बराबर शून्य दशमलव ४७ को अनुपातमा हकप्रद शेयर विक्री गरेको थियो । उक्त हकप्रद शेयर पश्चात रू. १ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख ५६ हजार चुक्तापूँजी कायम गरेको छ । सोही पूँजीको आधारमा अपिले हकप्रद शेयर विक्री गरेको हो ।
यस वर्ष अपि पावरले ९ प्रतिशत बोनस शेयर समेत वितरण गरेको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा विक्री गरेको २९ दशमलव ३८ प्रतिशत हकप्रद शेयर पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ५६ हजार पुग्नेछ ।
कम्पनीले ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि थप पूँजी जुटाउन हकप्रदको सहारा लिएको हो । उक्त आयोजनाको अनुमानित लागत रू. ७ अर्ब ४० करोडमध्य रू. २ अर्ब २२ करोड शेयरधनीहरुबाट संकलन गर्ने योजना कम्पनीको रहेको छ ।